I-APARTMENT EYINTLOKO ene-WIFI kunye ne-NETFLIX
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJaborsibur
Indlu eqaqambileyo, ehlaziywe ngokupheleleyo, onke amagumbi angaphandle ajonge kwizibuko lasePasajes. Ilungele ukubaleka ngeempelaveki nabahlobo okanye ukuhlala ixesha elide nosapho. Iibhedi zikhululekile kakhulu kwaye ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo, uya kufumana yonke into oyifunayo ukulungiselela isidlo sakusasa esimnandi, isidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa. Kukho ilinen kunye neetawuli zinikezelwe. Uyakwazi ukupaka simahla esitratweni.
Ukuqhuba ukusuka kwigumbi ukuya eSan Sebastian kumalunga nemizuzu eli-10.
UFIKELELO LOKUQALA kwiflethi LUZIZENZELEKILEYO ngesitshixo se-elektroniki undwendwe olunokuthi lusebenzise kwi-smartphone yalo, xa ngaphakathi kwindlu kukho izitshixo eziqhelekileyo.
4.54 · Izimvo eziyi-72
Ummelwane unazo zonke iinkonzo ezisisiseko eziyimfuneko, ivenkile enkulu, ibhula, ikhemesti, indawo yokwenza iinwele, iibhari njl njl ... kwaye idityaniswe kakuhle ngemoto okanye ngololiwe okanye ngebhasi ukutyelela iSan Sebastian kunye nezinye iidolophu ezikummandla wonxweme (IiPassages, I-Fuenterrabía, i-Irun) okanye i-French Basque Country (i-Hendaye, i-Baiona njl,,). okanye ukutyelela i-interior ye-Gipuzkoa okanye i-Navarra (i-Pamplona njl ,,) ekubeni inokufikelela ngokukhawuleza kwindlela ehamba phambili ngaloo ndlela igwema naluphi na uhlobo lwe-traffic jams.
Umbuki zindwendwe ngu- Jaborsibur
Ndiya kufumaneka ukuphendula imibuzo yakho okanye ukukunceda ngayo nayiphi na indlela eyimfuneko.
UFIKELELO LOKUQALA kwiflethi LUZIZENZELEKILEYO ngesitshixo se-elektroni…
Inombolo yomthetho: ESS02255
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Errenteria